नेप्से ७.४१ अंकले बढेर ११०९.७३ विन्दुमा | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर नेप्से ७.४१ अंकले बढेर ११०९.७३ विन्दुमा
on: February 25, 2019 मुख्य खबर, लगानी
नेप्से ७.४१ अंकले बढेर ११०९.७३ विन्दुमा
तत्काल प्यान अनिवार्य नगरिने अनौपचारिक सहमति
फागुन १३, काठमाडौं (अस) । सोमवार नेप्से परिसूचक ७ दशमलव ४१ अंकले बढेर १ हजार १०९ दशमलव ७३ विन्दुमा पुगेको छ । १ हजार १०२ दशमलव ४६ विन्दुबाट शुरू भएको कारोबार दिनभरमा उच्च विन्दु १ हजार १०९ दशमलव ८८ सम्म पुगेको थियो भने न्यून विन्दु १ हजार ९९ दशमलव ९८ सम्म आएको थियो । पूँजीबजारको प्राविधिक विश्लेषकहरूले नेप्सेको बलियो टेवा विन्दु १ हजार १०० रहेकाले बजारले टेवा पाएको अनुमान गरेका छन् । न्यून विन्दु १ हजार ९९ दशमलव ९८ सम्म आएको नेप्सेले सो विन्दुमा टेवा पाएर उकालो लागेको छ । सोमवारको कारोबारमा परिसूचक टेवा विन्दु १ हजार १०० वरिपरि रहेको छ । दिनभरको कारोबारमा अधिकांश समय घटेको नेप्से अन्त्यमा शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत बढेर बन्द भएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी वैशाख १ गतेदेखि शेयर खरीदमा प्यान अनिवार्य गर्ने भनेपछि पछिल्लो समय लगानीकर्ताको विरोधका कारण शेयर बजार प्रभावित भएको थियो । तर, सोमवार धितोपत्र बोर्डले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले प्यान व्यवस्था तत्काल अनिवार्य नगरी ऐच्छिक गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका छन् । सो छलफलमा तत्काल प्यान अनिवार्य नगरिने अनौपचारिक सहमति पनि भएको छ । जसका कारण नेप्से बढेको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ । कारोबारमा आएका १० समूहको परिसूचकमा वित्त समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ११ प्रतिशत घटेको छ । तर, बाँकी ९ समूहको परिसूचक बढेकाले समग्र नेप्से बढेको हो ।
सोमवार रू. २० करोड ३८ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । आइतवारको तुलनामा कारोबार रकम रू. ६१ लाख ५७ हजार घटेको हो । आइतवार रू. २१ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स १ दशमलव ५९ प्रतिशत बढेर २३५ दशमलव ७८ विन्दुमा पुगेको छ ।
१० समूहको परिसूचकमा ९ समूहको परिसूचक बढ्यो
१६६ कम्पनीको कारोबारमा ९८ कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्यो
१६६ कम्पनीको शेयर कारोबारमा ९८ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ४३ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, २५ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य ६ दशमलव ४९ प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता रू. ८२ पुगेको छ । त्यस्तै, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड शेयर मूल्य ५ दशमलव ८६ प्रतिशत र नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य ४ दशमलव ८ प्रतिशत बढेको छ ।
सहयोगी विकास बैंक लिमिटेडको शेयर मूल्य ८ दशमलव ८७ प्रतिशत घटेर प्रतिकित्ता रू. १८५ पुगेको छ । ग्लोबल आईएमई समुन्नत स्किम–१, नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य ३ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ ।
नबिल बैंक लिमिटेडको प्रतिकित्ता रू. ७९४ मा सर्वाधिक रू. २ करोड ५० लाख ७१ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, दोस्रोमा नबिल बैंक लिमिटेड संस्थापक शेयरको प्रतिकित्ता रू. ७५० मा रू. १ करोड ४० लाख १२ हजार र तेस्रोमा अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्रतिकित्ता रू. २२४ मा रू. ७८ लाख ८६ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।